02 / 05 / 2013 - RayHaber
နေ့: မေလ22013
02 / 05 / 2013 Levent Ozen 0
မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနှင့်အတူငါ Dikkald တံတားဆက်သွယ်ထားသောရပ်ကွက်အတွင်းနှင့် woodshed woodshed အားဖြင့်ပြန်တမ်းလျှင်တံတားယာဉ်အသွားအလာ woodshed ထွန်းကားသောကြောင့်အသွားအလာအခမ်းအနားမှဖွင့်လှစ်။ ရည်မှန်းချက်များနှင့်အတူဘဝကိုမှအစွန်းရောက်ထွက်သက်မှဖြေရှင်းချက်နှင့်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးအားဖြင့်ပိတျဆို့နတေဲ့သွေးကြောထဲမှာ Bursa သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, '' မှီ Bursa [ပို ... ]
အဆင့်ဖြတ်မှာယာဉ်မတော်တဆမှု: သေပြီ 1,2ဒဏ်ရာရ
အဆင့်ဖြတ်မှာယာဉ်မတော်တဆမှု: သေပြီ 1,2အဆိုပါထိန်းချုပ်မှုလျှော့ရိုက်ထည့်ဖို့ TCDD အဆင့်ကိုကူးဒဏ်ရာရခြင်းနှင့်လျှင်မြန်စွာလူတစ်ဦးအနေဖြင့်စွပ်စွဲရထားဝင်တိုက်သည့်ထရပ်ကားများတွင်ရလဒ်3အဖြစ်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ Selcuk Bag-in ကို 1 လူတွေအတွက်ဖြစ်ပေါ်အဆင့်ကိုကူးမတော်တဆမှုတွင်တည်ရှိသည် [ပို ... ]
ဘဲဂရိတ်အတွက်မီးရထားပျက်ကျမှု: 15 ဒဏ်ရာရ
ဘဲဂရိတ်အတွက်မီးရထားပျက်ကျမှု: 15 ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းနှစ်ခုခရီးသည်ရထား၏ဆားဘီးယားရဲ့မြို့တော်ဘဲဂရိတ်, တိုက်မှုဒဏ်ရာရ, ကနဦးအစီရင်ခံချက်များအရသိရသည် 15 ကလူဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ သူတို့ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းသို့ ဝင်. အဖြစ်လက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, Novi ဘဲဂရိတ်-Zemun အကြားအပြေးနှစ်ခုခရီးသည်ရထား, တိုက်မိ။ မတော်တဆမှုများတွင် [ပို ... ]
အဆိုပါပဋိညာဉ်စာတမ်းထဲမှာ Giresun အဆိုပါမရိန်းမီးရထားပေါ် binding နေကြတယ်
အဆိုပါပဋိညာဉ်စာတမ်းထဲမှာ Giresun စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း၏ Seaways မီးရထား Giresun ကုန်သည်ကြီးများအသင်းအပေါ် binding နေကြသည်နှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များဥက္ကဋ္ဌဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့၏ Hasan Çakırmelikoğlu, Giresun ၏စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ယက်၏အရေးကြီးပုံကိုမှအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲငင်။ "ရထားလမ်းဆိပ်ကမ်းချိတ်ဆက်မှုရပါမယ်" TSO ကသမ္မတÇakırmelikoğlu; "ပင်လယ်, လေ, လမ်းနှင့်ရထားလမ်း [ပို ... ]
ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများ Bursada ဓါတ်ရထားလိုင်းယာဉ်အသွားအလာလေ့လာမှု (ဓာတ်ပုံပြခန်း)
မွို့၌ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ဆက်လက်ပြုလုပ် Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်လမ်းရထားလိုင်းကို၏ Bursada ဓါတ်ရထားလိုင်းယာဉ်အသွားအလာလေ့လာမှုအပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ, ဒေသခံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပျက်သဘောဆောင်သောလမ်းအတွက်ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်မြို့တော်မြူနီစီပယ်လမ်းရထားလိုင်းကိုအလုပ်အားဖြင့်ငါးလအကြာကစတင် [ပို ... ]
02 / 05 / 2013 Levent Ozen 3
တူရကီသီယိုးပီးယားရှိမီးရထားလမ်းတည်ဆောက်ကြမည်, သူ5တထောင်ကီလိုမီတာ၏အတိုင်းအတာနီးစပ်သူတစ်ဦးရထားလမ်းတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွေအတွက် button ကိုဖိလေ၏။ တောင်အာဖရိကနှင့်တူရကီအပြင်ဘက် BRICS နိုင်ငံများ, အီသီယိုးပီးတစ်ရထားလမ်းတည်ဆောက်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အတွင်းတရုတ်နှင့်အီသီယိုးပီး [ပို ... ]
အမြင့်မြန်နှုန်းရထား၏တူရကီ-Kayseri ယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားအကြားဝန်ကြီး Yildirim
အချိန်ပိုမိုပေါင်းထည့်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်အမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထားမှမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထားယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားအကြားတူရကီ-Kayseri ပြည်နယ်ကနေဝန်ကြီးYıldırım။ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Binali Yildirim, တူရကီ-Kayseri အကြားအမြင့်မြန်နှုန်းရထား၏သတငျးကောငျးကိုပေး၏။ Erciyes တက္ကသိုလ် Sabanci ယဉ်ကျေးမှုစင်တာ [ပို ... ]
တာ့ခ်မင်နစ္စတန်နှင့်ကာဇက်စတန်မီးရထားပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မည်, ဗဟိုအာရှမှာရှိတဲ့မီးရထား၏ပြီးစီးအတူပေါင်းစည်း။ 11 လိုင်းမေလတွင်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်, ကအီရန်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပြီးမြောက်ရန်မျှော်လင့်နေသည်။ ကာဇက်စတန်, တာ့ခ်မင်နစ္စတန်အတွက်မီးရထားလိုင်း၏ 146 ကီလိုမီတာ 700, 80 ကီလိုမီတာအီရန်အတွက်တည်ဆောက်ခဲ့ကီလိုမီတာ။ [ပို ... ]
သံလမ်းတူရကီအတွက်ဥပဒေတရားဝင်ပြန်တမ်းရက်စွဲပါမေလ 1 ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေး၏လွတ်လပ်အပေါ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်ပုဂ္ဂလိကဖြစ်ပါတယ်။ ကရည်ရွယ်ထားသည်အဘယ်သို့နည်း, ပညတ်တရားအားဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ပွင့်လင်းရထားလမ်းခရီးသည်နှင့်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး, ဝန်ဆောင်မှု၏အရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက်များကိုအတွက်အသင့်လျော်ဆုံးအားဖြင့်၎င်း, နိမ့်ဆုံးထိရောက်ပါလိမ့်မည် [ပို ... ]
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍအတူတကွ Intertraffic အစ္စတန်ဘူလ်လာ
အဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ်ကုန်စည်ပြပွဲစင်တာမှအကြား 29 မေလ 31 2013 - geliyor.uluslarara အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍအခြေခံအဆောက်အအုံ Intertraffic အစ္စတန်ဘူလ်, ယာဉ်အသွားအလာစီမံခန့်ခွဲမှု, လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ယာဉ်ရပ်နားစနစ်များတရားမျှတသော Intertraffic အစ္စတန်ဘူလ်,7ပေါင်းစပ်။ တခါကျင်းပခဲ့တယ်။ ငွေရတတ်သောသူပံ့ပိုးမှုများကိုပရိုဖိုင်း၏ညှနျကွားထဲမှာကုန်သွယ်ရေး [ပို ... ]
Izmir Halkapınardကျော်သစ်လူကူးတံတားအလုပ်ခွံ့ပြုသည်လက်ရှိတံတားအတွက်ပိတ်ဆို့မှုကို Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် tripped လွှဲပြောင်းပြီးစီးခဲ့ပြီးမီထရိုဘူတာနှင့်HalkapınarİZBANခြင်းဖြင့်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိသံမဏိ footbridge ရဲ့ width ဟာ 1.857မီတာကနေဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ပုံသေ [ပို ... ]
ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာတစ်ဦးပိုမိုကျယ်ပြန်တူရကီအတွက် Congresium (ATO ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ) တွင်နောက်တဖန်ယခုနှစ်လမ်းဘေးကင်းလုံခြုံရေး "လမ်းမကြီးယာဉ်အသွားအလာအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစာတမ်းဖတ်ပွဲများနှင့်ပြပွဲ" မျှော်လင့်ထားသည့်နှင့်အဆွဲဆောင်ထားသည်ထက်ပါဝင်မှု, စတုတ္ထသေချာစေရန်အလို့ငှာနှစ်တွင်သုံးနှစ်အဘို့ကျင်းပ [ပို ... ]
RayHaber 02.05.2013 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
Gupilya , A.K.B. Civata, Allen Vida Silindir Başlı Vida Alımı İşi (TÜVASAŞ) Beton Travers Kalıbı alım işi Betonarme İhata Yaptırılacaktır (Doğanşehir Sinzalizasyon ve Elektrifikasyon Şeflik Binasının Etrafına) Benzer Demiryolu Haberleri ve İlginizi Çekebilecek Diğer HaberlerRayHaber [ပို ... ]
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Budak ACCI Antalya: မြန်ရထားလူပျိုလာကြတယ်Olalım (ဗီဒီယို)
Antalya ATSO နိုင်ငံတော်သမ္မတ Budak: အမြင့်မြန်နှုန်းရထားတစ်ဦးကကြင်ဖော်မဲ့လာကြတယ်, ယုံကြည်ခြင်းအားခေါ်ဆိုမှုထဲမှာတစ်ခုတည်းသောလာကြတယ်Olalımထုံးရထားထဲမှာ ... တူရကီ 25 ဒေါ်လာဘီလီယံတန်ဖိုး ANTALYA ရထား ACCI သမ္မတ Osman Çetin Budak Fast သီဆိုထိုက်သည်ကိုပေး Added [ပို ... ]
Yenikapı Marmaray Stop ကိုဖျက်ဆီး (ဗီဒီယို)
Marmaray Yenikapi Marmaray စီမံကိန်းBatıklarıရဲ့ပုံပြင်နှောင့်နှေးဖို့ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုဆွဲဆောင်ဒါကသင်္ဘောမှောက်မှုတစ်ရပ်ရပ်ပါ။ အစ္စတန်ဘူလ်၏ရေလက်ကြား၏ခိုင်ခိုင်လုံလုံ built-in ကမ္ဘာ့အလုပ်အများဆုံးရေကြောင်းကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း, ကမ္ဘာ့အနက်ရှိုင်းဆုံးပင်လယ်ကြမ်းပြင်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတစ်ခုမှာ [ပို ... ]
4 ။ လမ်းမယာဉ်အသွားအလာအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစာတမ်းဖတ်ပွဲများနှင့်ပြပွဲ
မေလ 8 10 2013-date ဖြစ်အောင် ''4အကြားကျင်းပလိမ့်မည်သည့်လမ်းမယာဉ်အသွားအလာအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစာတမ်းဖတ်ပွဲများနှင့်ပြပွဲ။ သင့်ရဲ့ကျေးဇူးတရားဆန္ဒရှိမှအဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင်လမ်းမကြီးယာဉ်အသွားအလာအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစာတမ်းဖတ်ပွဲများနှင့်ပြပွဲ။ Binali Yildirim ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး Muammer Guler [ပို ... ]
ရထားစနစ်လေ့လာရန်မြို့တော်ဝန် Mehmet Özhaseki, ထိုရထားလမ်းစနစ်၏2ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေးကနေÖzhaseki'ye။3ဇာတ်စင်နှင့်ဆန်းစစ်အလုပ်သောအရပ်။ အတူတူနှစ်ဦးစလုံးအတွက်လေ့လာမှုများကြည့်ရှုသည့်စည်ပင်သာယာအာဏာပိုင်များနှင့်တက္ကသိုလ်Beyazşehir-İldem-line ကိုနိုငျငံတျောသမ်မÖzhaseki Tala နှင့်အတူ [ပို ... ]
YHT လိုင်း Bilecikte ဖို့ဆန္ဒပြရန်
အဆိုပါ Bilecik ရဲ့ Marketplace ခရိုင်မှပူးတွဲ Demirkoy နေထိုင်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ဆန္ဒပြပွဲမှ Bilecikte YHT လိုင်း, ထို YHT လိုင်းသူတစ်ဦးရပ်ကွက်အတွင်းရဲ့ဆက်သွယ်မှုကျေးရွာများ၏လုပ်ရပ်များကြောင့်ငြင်းခုံ, ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ အဆိုပါတူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထား (YHT), တစ်ရပ်ကွက်မှာ Bilecik ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် [ပို ... ]
အဆိုပါ2နာရီမှာတော့ရထား Denizli မှ Izmir အကြား
2 နာရီအတွင်းဖြစ်လေ့ကျင့်ပေးရန် Denizli Izmir: သင်္ဘောများနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Binali အဆိုပါ Lightning, Denizli နှင့်အစ္စတန်ဘူလ်အကြားနှစ်ဆမီးရထားလမ်းစီမံကိန်းကို Denizli အဆုံးခရီးစဉ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်ပို့ဆောင်ရေး, ကပထမဦးဆုံးပြေးစတင်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ TCDD3။ လက်ထောက်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူး Muhsin [ပို ... ]
အဆိုပါမီးရထားအက်ဥပဒေဒါမှမဟုတ်တည်ထောင်ခြင်းများအတွက်ထောက်ပံ့နိုင်ငံတော်သမ္မတအဗ္ဗဒူလာဂူးလ်, တူရကီမီးရထားပို့ဆောင်ရေး Joint Stock Company (TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc က) ၏ခွင့်ပြုချက်သမ္မတ, 'ပညတ္တိကျမ်းမီးရထားပို့ဆောင်ရေးတူရကီ၏လစ်ဘရယ်အပေါ်' 'ဦးအတည်ပြုပါ။ နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်စာနယ်ဇင်း Center ကနေကြေငြာချက်အရ, [ပို ... ]